ओली सरकारले गर्नैपर्ने दुई काम : आर शर्मा – Maitri News
ओली सरकारले गर्नैपर्ने दुई काम : आर शर्मा
maitrinews August 21, 2020
प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट आम नेपाली नागरिक र नेकपाका नेता, कार्यकर्ताले ठूलो आशा गरेका छन् । पहिलो प्रधानमन्त्रीकाल अत्यन्तै सफल भएकै कारण आम निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइको प्रचण्ड बहुमतसहित उहाँलाई पाँच वर्षको सरकार बनाउन नेपाली नागरिकले जनादेश दिएका हुन् । पार्टीको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित ओलीलाई सरकार र पार्टी दुवै चलाउन पूर्ण जनादेश प्राप्त छ । पूर्ण लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित उहाँलाई कार्यकाल पूरा गर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन र रोक्नु हुँदैन । राष्ट्रको हितमा राम्रो काम गरेका ओलीलाई सरकार र पार्टी चलाउन दिए ओझेलमा परिन्छ भन्ने कुण्ठा पालेर पार्टीभित्रका केही नेताले उहाँको राजीनामा माग्नु र असहयोग गर्नु सरासर गैरकानुनी काम हो ।
नेकपाका नेताहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ओलीकै सक्षम नेतृत्वका कारण नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच एकीकरण भई शक्तिशाली नेकपा र इतिहासमै शक्तिशली सरकार बनेको हो । ओलीले जुन राजनीतिक उचाइ बनाउनुभएको छ त्यस्तो उचाइ र विश्वास आर्जन गरेको अरु नेता नेपालमा अहिले कोही छैन । घामजत्तिकै छर्लङ्ग यो तथ्यलाई नेकपाका नेताहरुले आत्मसमीक्षा गर्दै राजीनामा माग्न छाडेर पार्टी र सरकारलाई पूर्ण सफल बनाउन हृदयदेखि नै सहयोग गर्नुपर्छ । नेकपाले पाएको यो ऐतिहासिक अवसर र चुनौतीमा चुकियो भने यस्तो अवसर फेरि प्राप्त नहुनसक्छ ।
अहिले सरकार र नेकपाले चाहने हो भने ऐतिहासिक तथा युगान्तकारी काम गरी आगामी आधा शताब्दी निर्विल्प नेकपाको निर्वाचित सरकार बनाउन सकिनेछ । यसका लागि नेकपाको एउटै आवाजसहितको सहकार्य आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीदेखि दक्षिणी छिमेकी डराएको छ । उहाँ सत्यका लागि लड्नु भएको छ । सही अडान लिनुभएको छ । उहाँलाई झुकाउन नसकेपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र ज्यान छाडेर ओली सरकार असफल बनाउन लागिपरेका छन् । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा नेकपाभित्र एकता र सहकार्य झन् अपरिहार्य बनेको छ ।
आम नेपाली नागरिकले अत्यन्तै सुझबुझका साथ मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि नेकपालाई प्रचण्ड बहुमत दिएर सत्तामा पुर्याएका हुन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उच्च छवि बनाउनुभएका ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली नारामा होइन व्यवहारमा देखाउनैपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो शासनकालमा भारतीय नाकाबन्दी र विनासकारी भूकम्पले थला परेको नेपाललाई पुनर्जीवन दिनुभयो । भारतसँगको परनिर्भरता घटाउँदै चीनसित ऐतिहासिक सम्बन्ध सुधार गर्नुभयो । उहाँको कार्यबाट प्रभावित भएर नै गएको आम निर्वाचनमा थप ऐतिहासिक कामका लागि नेकपालाई आम नेपालीले चुने । आम नेपाली जनताले ओली सरकारबाट अहिले अपेक्षा गरेका दुई मुख्य काम भनेकै स्वास्थ्य र शिक्षामा आम नेपाली जनताको समान पहुँच हो । त्यसका लागि ठूलो हिम्मतका साथ ओली सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षालाई
राष्ट्रियकरण गरी आम नेपाली जनताको आवश्यकता र चाहना पूरा गरिदिनुपर्छ ।
कोरोना महामारीले थला परेको नेपालमा अहिले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा जुन अन्योल, विकृति र विसङ्गति बढेका छन् त्यसको निदानको भरपर्दो विकल्प भनेकै स्वास्थ्य र शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गरी सबै नेपालीलाई समान शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति गराउनु हो । अहिलेसम्मका आन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा रहेको वर्तमान संविधानमा गरिएको स्वास्थ्य र शिक्षाको समान पहुँचको व्यवस्था कार्यान्वयन गरी आम नेपाली जनता ढुक्कसँग बाँच्ने वातावरण बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता र चुनौती हो । ओली सरकारले चाहने हो भने यो कार्य सम्पन्न गर्न कसैले रोक्न र छेक्न सक्दैन । आम नेपाली नागरिकको यसमा पूर्ण सहयोग र समर्थन रहने छ ।
आज स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यापक विकृति र विसङ्गति किन आयो ? किन स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा आम नागरिकको पहुँच बाहिर गयो ? चरम महँगो भयो ? जताततै यस्तै प्रश्न गरिएको छ । मूलतः विगतमा अस्थिर राजनीति र अस्थिर सरकारका कारण औद्योगिक वातावरण नै बनेन । मुलुकका उद्योग कलकारखाना धमाधम बन्द भए । सरकारी उद्योग अन्धाधुन्ध निजीकरण गरियो । राज्य कमजोर भयो । लगानी वातावरण नभएपछि उद्योगी व्यवसायीले उद्योग क्षेत्रबाट हात झिके । केहीले विदेशतिर लगानी लगे भने केहीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरे । उनीहरुको लगानीसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण सुरु भयो । व्यापारीकरणसँगसँगै चरम विकृति र विसङ्गतिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । आम नेपाली जनता स्वास्थ्य र शिक्षाकै लागि चिन्तित छन् । उनीहरुको कमाइको अधिकांश अंश स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । निजी अस्पताल र निजी स्कुल सेवामुखी होइन नाफामुखी बने । सङ्कटको बेला पनि सहयोगी र सेवामुखी बनेनन् । आज नागरिकको जीवनमाथि खेलवाड गरे । कोरोना सङ्कटमा निजी अस्पताले बिरामीको उपचार नगरेकै कारण कतिपयले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको यथार्थ लुकेको छैन ।
यो यथार्थतालाई आत्मसात् गर्दै सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियकरण गरी सर्वसुलभ,सस्तो र भरपर्दो स्वास्थ्य र शिक्षामा आम जनताको पहुँच पुर्याउन सामाजिक क्रान्ति आवश्यक छ । औद्योगिक र लगानी वातावरण बनाई देशका सबै उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उद्योग क्षेत्रमा लगान गर्न र लगानी सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनपर्छ । लगानी सुरक्षा नभएकै कारण उद्योगी तथा व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रबाट हात झिकेको तीतो यथार्थलाई आत्मसात् गरी सरकारले उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न निजी उद्योगीहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । उद्योग क्षेत्रको विकासबाटमात्रै लाखौँको सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । अब औद्योगिक क्रान्तिका लागि राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ ।
इतिहासको एक कालखण्डमा नेपाल हरेक कुरामा आत्मनिर्भर थियो । आफ्नै किसिमको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र थियो । राजनीतिक घटनाक्रम र सत्ता फेरिँदै जाँदा अधिकारका आन्दोलनले पुराना सत्ताका राम्रा कुरालाई पनि विस्थापित गर्दै गयो, आत्मसात् गरिएन, जोगाइएन । मुलुकको मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्र तहसनहस भयो । अब कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरी कृषि क्रान्ति गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । आज संविधान उत्कृष्ट त बनाइएको छ तर संविधानमा मात्र अधिकारको व्यवस्था गरेर मुलुक बनाउन सकिँदो रहेनछ । त्यसका लागि सक्षम र भविष्यद्रष्टा राजनेताविना सम्भव छैन । आज त्यस्तै राजनेता बन्ने अवसर प्रधानमन्त्री ओलीलाई छ । उहाँले हिम्मत गर्नैपर्छ । उहाँलाई व्यक्तिगत स्वार्थ छैन । परिवारका कसैलाई कमाइदिनु, भविष्यका लागि धनसम्पत्ति थुपार्नु छैन । आफूसँग भएको धनसम्पत्ति राष्ट्रलाई नै सुम्पने घोषणा गरिसक्नुभएका ओलीले यो ऐतिहासिक अवसरलाई भरपूर उपयोग गरी आम नेपालीलाई सुखी र मुलुक समृद्ध बनाउन कठोर निर्णय गनुपर्ने बेला आएको छ । सानातिना विवादमा नअल्मलिई ऐतिहासिक काम गरेर मुलुकलाई सही निकास दिनुपर्छ । यति ठूलो दुर्लभ जनमत प्राप्त ओली सरकार केही गरी असफल भयो भने नेपाल सफल हुँदैन । नेपाली नागरिकको भविष्य सुरक्षित हुन सक्दैन । साथै नेकपाको भविष्य पनि सङ्कटमा पर्नेछ ।
नेपालका पहिला कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रत्येक गाउँमा पैसा पठाउनेदेखि सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिने ऐतिहासिक देखिने काम गरेयता राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गरी मुलुकबासीको शीर ठाडो पार्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको छ ।
अहिले ओली सबैको आशा र भरोसाको केन्दविन्दु हुनुहुन्छ । उहाँको काँधमा पार्टी र मुलुक दुवैलाई सही निकास दिनुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ । उहाँले सही निर्णय र सही काम गर्नुभयो भने मुलुक र पार्टी दुवै सप्रिन्छन् गलत गर्नुभयो भने देश पनि डुब्छ र पार्टी पनि धराशायी बन्छ ।
मुलुक र पार्टीसामुको यो ऐतिहासिक अवसर र चुनौती सामना गरी सही निकास दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता तन,मन र बचनले सहयोग गर्नुपर्छ । आफ्नो कमजोरी लुकाउन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु कुनै अर्थमा पनि क्षम्य हुँदैन । अहिलेको घडीमा ओलीको उचाइ बनाउन अरु नेतालाई सम्भव छैन र सक्नु हुन्न पनि । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले उहाँहरुको प्रधानमन्त्रीकालमा के कति काम गर्नुभयो, इतिहासमा दर्ता हुने कुनै काम गर्नुभयो कि भएन ? उहाँहरुले एकपल्ट इतिहास पल्टाएर हेर्नु भयो भने आफै जवाफ पाउनुहुनेछ । सौताका रिसले पतिको काखमा पिसाब फेर्नु उचित होइन । भाइ मिल्दा रामलक्षणको विजयश्री, भाइ नमिल्दा रावण र यदुवंश विनासको इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
अतः कोरोना महामारीको यो सङ्कटको बेला विवाद होइन मिलेर काम गरी मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ । मुलुकलाई सही निकास दिन दिई आम नेपालीको समास्या समाधान गर्न सकियो भनेमात्र नेपाल र नेकपाको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ ।
Previous Previous post: राष्ट्रपतिद्वारा स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमको पालना गरेर तीज मनाउन आग्रह
Next Next post: निषेधाज्ञाले उपत्यकाको जनजीवन शाान्त